China Australia Imbwa keji Mugadziri uye mutengesi | Mujiang
Australia Imbwa keji
Imbwa dzinovharirwa ndedze 1.2 * 1.8 kana 1.5 * 1.8m. Mutengi anogona kuiunganidza sekudiwa.
Kune imbwa imbwa, haina kuita keji, asi imba yembwa, imbwa inogona kuva nenzvimbo huru mairi.
Nezve saizi yekennel, gamuchira mutengi kune akajairwa, uye isu tinogona kuzvipa sekuda kwako.
Iyo keji yakasimbiswa uye isu takashandisa iyo yakasungwa waya tambo kuti tiigadzire. Inogona kudzivirira keji kana mbwanana kubuda muchizarira, chii chimwe, inogona kudzivirira vanhu kuti vave vakachengeteka zvakanyanya.
1.Zvinhu zvembwa kennel
Iyo chubhu imbwa inomhanya yakagadzirira kushandisa, nyore kubata, yakaoma, yakasimba tube.
Yakabatanidzwa musuwo nekuvharwa kwakachengeteka.
2.Surface kurapwa kweimbwa kennel
Magetsi kwakakurudzira kana kupisa kwakanyudzwa kwakakurudzira ndiwo maitiro ekuisa unodzivirira zinc kupfeka kune simbi kana
iron, kuitira kudzivirira ngura. Kunyangwe galvanization inogona kuitwa nemakemikari emagetsi uye magetsi ekuisa maitiro, nzira yakajairika mukushandisa kwazvino kupisa-dip galvanization, mune iyo simbi zvikamu
akanyudzwa mubhavhu rezinc yakanyungudutswa.
3.Protection chembwa kennel
Kusarudza imbwa kennel kunogona kukupa mhinduro inokurumidza uye isingadhuri yekupa shamwari yako yepamoyo imba yakachengeteka yekuzorora. Zvakare imbwa yedu kennel inopa yepamusoro kuvaka uye yakapfava uye yakashongedzwa kupera, kana iwe unogona kuenda neyedu mapaneru kana mabhokisi mitsara; imwe neimwe keji iyo inopa ngura-isingagadzirike, kwakakurudzira simbi kuvaka uye nyore-kwe-gungano.
Pashure: Zingi uye Simbi Fence
Zvadaro: Solid huni hwakawanda kubheka varnish yemusuwo wakadzika